Xiddigihii hore ee Chelsea Essien & Cole oo xabsiga la dhigayo!!
Thursday, January 24th, 2019 - 14:05:10
Wednesday April 19, 2017 - 09:52:46 in Wararka by Muuse Cabdi
Xiddigihii hore ee kooxda Chelsea Michael Essien iyo Carlton Cole ayaa xabsi ku yaalla dalka Indonesia la dhigayaa keddib markii ay jebiyeen sharci dhanka socdaalka ah oo u yaalla dalkaas.
Labadan laacib ayaa ka mid ah xiddigo caan ah oo kubbadda cagta ciyaara oo tegay dalka Indonesian si gaar ahna ka dheela horyaalkiisa heerka sare, iyadoo taageerayaal boqollaal gaaraya ay daawadaan ciyaarahooda iyo tababarkooda.
Balse mustaqbalkooda ay dalkaas kusii joogi karaan ayaa hadda khatar ku jira, Persib Bandung ayaan heysan warqado sax ah oo dhanka socdaalka ay dalka kusoo galeen iyo kuwa ay ku shaqeystaan oo dowli ah.
"Talaadadii, April 18 2017, Persib Bandung ayaan wax codsi ah oo ay nimanan ku dejineyso u dhiiban dowladda, waxaana ay warqadda codsiga ah ee ay heysteen oo ah mid dad booqasho ku yimid oo kale ah ayaa ku ekeyd maalintaas," guddoomiyaha soo laanta soo galootiga Maulia Purnamawati ayaa qoraalkiisa ku sheegay.
Afhayeen ayaa sheegay: "Waa dad xirfadleyaal ah, sidaas darteed waa in ay ruqsad heystaan si ay uga shaqeystaan Indonesia."
Sharciga dalka Indonesia, qofka shisheeyaha ah ee si aan nidaami aheyn isaga shaqeysta ayaa wajahaya 5-sano oo xabsi ah.
Persib tababaraheeda Umuh Muctar ayaana sharcigaas aad uga xumaaday, waxaana uu sheegay in Indonesia ay ku faaneyso in ay dalka keensato ciyaartoy la mid ah Essien oo horyaalka dalkeeda ka ciyaaraya.
"Iyagu halkan waxay u joogaan in aan la raaxeysanno, waxay doonayaan in ay sare u qaadaan kubbadda cagta Indonesia oo ay magaceenna ka gadaan dunida," ayuu wariyeyaasha u sheegay.
"Qof walba ayaa garanaya Essien waana laacib weyn oo Caalami ah, isagu ma aha qof soo galooti sharci darro ah.”
Waxaa la rumeysanyahay in ay fadeexad weyn ku noqon doonto labadaba tani, kooxda Persib ayaana isku deyeysa in ay heshiis kala gaarto arrinta xiddigahaan madaxda hey’adda Socdaalka dalkaas iyadoo kaashaneysa xiriirka kubbadda cagta ee Indonesia, Indonesian FA ayaana oggolaan kara in xiddigahaan ay si sharci ah dalka ku joogaan.
Essien iyo Cole ayaan midkoodna u ciyaari Karin kooxdiisa inta xaaladdooda ay weji kale yeelaneyso, waxayna kooxda ku biireen bishii March.
Waxay labaduba kusoo billowdeen markoodii u horreysay ee ay horyaalkaas ka ciyaaraan, safka Persib toddobaadkan, waxaana ay 0-0 kula garab dhaceen kooxda Arema.